इजरायलका पूर्व प्रधानमन्त्री नेतान्याहुको हवाईमा लुकेको एजेन्डा छ
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » हवाई अड्डा » इजरायलका पूर्व प्रधानमन्त्री नेतान्याहुको हवाईमा लुकेको एजेन्डा छ
हवाई अड्डा • ब्रेकिंग यात्रा समाचार • संस्कृति • सरकारी समाचार • हवाई ताजा समाचार • इजरायल ब्रेकिंग न्यूज • लक्जरी समाचार • समाचार • मान्छे • अहिले प्रचलनमा • संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रेकिंग न्यूज • विभिन्न समाचार
Lanai, हवाई को अनानास टापु को रूप मा पनि जानिन्छ, स्थान अरबपतिहरु र हस्तिहरु को लागी गोपनीयता र विलासिता को आनन्द को लागी यात्रा हो। यो सूची मा माइक्रोसफ्ट को सह संस्थापक, एल्टन जोन, राष्ट्रपतिहरु, र धेरै धेरै सामेल छन्। अब, इजरायल बाट पूर्व प्रधानमन्त्री Lanai मा देखीएको छ, तर त्यहाँ कथा को लागी धेरै हुन सक्छ - एक षडयन्त्र?
इजरायलले आफ्ना नागरिकहरुलाई विदेश नजान भनिरहेको छ, तर पूर्व इजरायली प्रधानमन्त्री र वर्तमान विपक्षी नेता बेन्जामिन नेतान्याहु हाल हवाईको लानाई टापुमा छुट्टी मनाइरहेका छन्।
Lanai को टापु लैरी Elisson, एक यहूदी अमेरिकी अरबपति र इन्टरनेट टेक कम्पनी को मालिक को स्वामित्वमा छ बजेट.
ल्यारी एलिसन इजरायलमा बेन्जामिन नेतान्याहूको आगामी भ्रष्टाचार परीक्षणमा एक अभियोजन-साक्षी पनि हुन्।
"म एफ मा छुहाम्रो तुहरु लानाई, र पूर्व प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेनेनाहुआ यहाँ बस्दै हुनुहुन्छ, मोसाद अंगरक्षक को एक समूह संग, "सन्देश एक होटल अतिथि द्वारा आज पोस्ट गरिएको थियो।
जब एक पूर्व प्रधानमन्त्री यात्रा गरीरहनुभएको छ, एक मान्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ सधैं एक लुकेको एजेन्डा छ? पूर्व इजरायली पीएम लानाई टापु मा देखीएको संग, यो एजेन्डा एक हवाई इंद्रधनुष को लागी खोजिरहेको छ, वा शायद एक अभियोजन साक्षी जो पीएम को बिरुद्ध एक आगामी मुद्दा मा अभियोजक को लागी गवाही दिन को लागी भेटाईन्छ?
उही दिन, अमेरिकी राज्य हवाई मा अर्को मृत्यु र 763३ अतिरिक्त COVID-१ infections संक्रमण रेकर्ड गरियो। द्वीप द्वारा गणना Oahu मा ४ 19 new नयाँ माउ, माउ मा १२३, हवाई टापु मा १२469, Kauai मा २ 123, मोलोकाई मा ५, ३ मा सामेल छन् लानाई, र ११ हवाई बासिन्दा राज्य बाहिर निदान।
अगस्त १ On मा, इजरायल मा वर्तमान विपक्षी नेता सान फ्रान्सिस्को एयरपोर्ट मा एक एयरपोर्ट ट्रली मा बसेको उनको गोल्फ बैग को लागी पर्खिरहेको देखियो। जाहिर छ, उनी तेल अवीव बाट हवाई को लानाई टापु सम्म आफ्नो लामो बाटो मा थिए, इजरायल को टाइम्स द्वारा रिपोर्ट गरीएको छ।
Lanai को चार मौसम मा रहनु सस्तो छैन।
मा पेन्टहाउस सुइट फोर सीजन होटल लनाई US $ 21,000 को लागत प्रति रात, यो हवाई मा सबै भन्दा महंगा सुइट बनाउन। यो टापु २ गोल्फ कोर्स को घर हो, Manele गोल्फ कोर्स सहित। १2४ मा, माइक्रोसफ्ट को सह संस्थापक बिल गेट्स कोर्स को १th औं प्वाल मा विवाह भयो।
पूर्व प्रधानमन्त्रीले जोड दिए कि उनी र उनको परिवार हवाई को लानाई को यात्रा को लागी तिर्दै छन्, यो टापु समय को साथ धेरै करोडपतिहरु र अरबपतिहरु को लागी होस्ट को रूप मा परिचित छ।
टाइम्स अफ इजरायलका अनुसार यातायात मन्त्रीले विदेश भ्रमणको बिरुद्ध सरकारको अपीलको बाबजुद अमेरिकामा छुट्टी मनाइरहेका छन्।
कोभिड -१ of को डेल्टा संस्करण को एक वर्तमान रेकर्ड प्रकोप को बावजूद, हवाई हरेक दिन २०-३०,००० नयाँ आगन्तुकहरुलाई स्वागत गर्दछ। त्यस्ता आगन्तुकहरु अमेरिकी गन्तव्यहरु बाट आइपुगेका छन् र अमेरिका द्वारा जारी टीकाकरण को एक सीडीसी प्रमाणपत्र देखाउन वा एक यूएस द्वारा जारी पीसीआर परीक्षण प्रमाणपत्र उत्पादन गर्न को लागी आवश्यक छ।
तसर्थ, आगन्तुकहरु प्राय: आन्तरिक पर्यटकहरु वा फर्कने बासिन्दा हुन्।
यो स्पष्ट छैन कि पूर्व प्रधानमन्त्रीले यो कसरी गर्न सक्थे यदि सैन फ्रान्सिस्को मा एक स्टपओवर बिना हवाई उडान, इजरायली मिडिया मा रिपोर्ट।
Lanai को टापु माउ काउन्टी को हिस्सा हो र 98% भन्दा बढि निजी ओरेकल लेरी एलिसन को प्रमुख को स्वामित्वमा छ।
सबैभन्दा सानो बसोबास गर्ने द्वीप यात्री हवाई मा यात्रा गर्न सक्छन्, Lanai यसको आगन्तुकहरु को लागी ठूलो मोह प्रदान गर्दछ।
पूर्व प्रधानमन्त्री को लागी, यो वास्तव मा धेरै धेरै गर्न सक्छ - टापु को मालिक र साथी ल्यारी एलिसन संग एक बैठक। एलिसन पूर्व प्रधानमन्त्री को बिरुद्ध एक महत्वपूर्ण आगामी भ्रष्टाचार परीक्षण मा एक साक्षी पनि हो।
माउई बाट मात्र miles माईल, अझै एक संसार टाढा, Lanai २ ठाउँहरु जस्तै महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो विलासी रिसोर्ट्स मा भेटिन्छ जहाँ आगन्तुकहरु विश्व स्तरीय सुविधाहरु र च्याम्पियनशिप स्तर गोल्फ मा लिप्त हुन सक्छन्। अर्को टापुको असहज फिर्ता सडकहरु संग एक ४-पा wheel्ग्रा ड्राइभ गाडी मा उफ्रिएको पाइन्छ-हराएको बाटो को खजाना अन्वेषण गर्न। निर्मलता, साहसिक, र गोपनीयता को9मा पाउन सकिन्छ Lanai को क्षेत्रहरु.
जब कोभिड -१ hit हिट भयो, एलिसनले लानाईमा ब्यापार भाडा हटाए, र २०१ in मा, उनले वेलनेस कम्पनी सेन्सेई स्थापना गरे, जसले स्पा र सौर्य उर्जा ग्रीनहाउसहरुको निरीक्षण गर्दछ।
एलिसनले २०१२ मा करिब percent percent प्रतिशत टापु एक अमेरिकी डलर ३०० मिलियन डलरमा किनेका थिए। उनको खरिदमा ,98,००० (३५,२०० हेक्टर) टापुको ,2012 ०,००० एकड (३,,४०० हेक्टर) जमिन सामेल छ।
Lanai, जो लगभग ३,२०० बासिन्दाहरु को घर हो, हवाई मा सबैभन्दा सानो बस्ती टापु हो र शान्त समुद्र तटहरु, असभ्य भूभाग, उच्च अन्त रिसोर्ट्स र एलिसन को स्थायित्व महत्वाकांक्षाहरु को घर हो, जसलाई उनी पुलामा लनाई नामक एक विकास कम्पनी को माध्यम बाट कार्यान्वयन गरीरहेछन्।
१४१ वर्ग-माइल (३141५ वर्ग किमी) टापु, जो माउ को तट बाट miles माईल (१३ किमी) टाढा छ, शून्य यातायात बत्ती र केहि पक्का सडकहरु छन्। फोर्ब्स। अन्य हवाई टापुहरु संग तुलना, Lanai एकान्त छ - तर एलिसन कि परिवर्तन गर्ने योजना छ। उनी लनाईलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन चाहन्छन्।
हाल, टापु २ चार मौसम होटल र सानो B&B प्रकार आवास विकल्प को एक संख्या को घर हो।
इजरायल मा, नेतन्याहू धोखाधडी र ३ अलग अलग मामला मा विश्वास भंग को आरोप मा मुद्दा चलाईएको छ, साथै ती मध्ये एक मा घूस को लागी। उनी गल्ती अस्वीकार गर्छन्।
एलिसन नेतान्याहूको भ्रष्टाचारको मुद्दामा धेरै सय अभियोजन साक्षीहरु मध्ये एक हुन्।
उसको नाम कथित २ वटा केसमा आएको थियो र गत बर्ष एउटा रिपोर्टले भन्यो कि उसले पैरवी गरी इजरायली मुगल अर्नोन मिल्चनलाई आफ्नो वकिल छोड्न राजी गरायो ताकि नेतान्याहूले उसलाई काममा लगाउन सकून्।
नैन्सी बोर्ट्स भन्छन्:
अगस्त २,, २०२० ० 21::2021
Innuendos, गलत हिज्जे, अप्रमाणित आरोप। कहीं लेख एलिसन (एलिसन होइन) भन्छन्
टापु मा थियो, नेतान्याहू संग भेटियो वा एलिसन को कर्मचारी संग बस्ने व्यवस्था।
लेखकको पूर्वाग्रह स्पष्ट देखिन्छ। मान्य वा सम्मानजनक रिपोर्टिंग छैन!